खेलअघि मैत्रीपूर्ण खेल्न अनुमति : RajdhaniDaily.com
काठमाडौं । वागमती प्रदेश सरकारको आफैं संचारगृह संचालन गर्ने निणर्य सच्याउन माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेललाई...
देउवा भन्छन्, फेरि सभापतिमा उठ्छु, निधिले भने ‘मलाई सघाउनुस्’
महेश्वर गौतम - June 20, 2021 0
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको आगामी भदौमा हुने १४औं महाधिवेशनमा फेरि एकपटक आफू सभापतिमा उठ्ने बताएका छन् । सभापति देउवाले शनिबार प्रदेश...
काठमाडौं । १६ वैशाखबाट काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञालाई नयाँ मोडालिटीबाट क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लगिने भएको छ । तर, अघिल्लो पटक जस्तो यस पटक एकै...
प्रभु साहसँग किन चिढिए प्रधानमन्त्री ओली ?
काठमाडौँ । विगत लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिदै आएका माओवादी नेता प्रभु साह र प्रधानमन्त्री बिचको सम्बन्ध अहिले चिसिएको छ ।...
सुभाष साह - June 19, 2021 0
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)भित्रको विवाद समाधान गर्दै पार्टी एकजुट गराउन लागि दोस्रो तहका नेताहरू अन्तिम कसरतमा जुटेका छन् । उनीहरूले पार्टी जुनसुकै...
तिव्वतको रोडसी खोलाको ताल खुल्यो, तामाकोशीमा बाढी आउने सम्भावना टर्याे
दीपशंकर चौलागाई - June 20, 2021 0
दोलखा । तिव्वतको रोडसी खोलाको त्रासबाट नेपाली मुक्त भएका छन् । पहिरोले थुनिएका रोडसी नदी चिनिया नागरिकले खुलाएपछि तत्कालका लागि नेपालमा जोखिम टरेको हो...
निषेधाज्ञा खुकुलाे, कुन पसल कुनबार खाेल्न पाइने (सूचीसहित)
काठमाडाैं । काठमाडौँ उपत्यकामा केही खुकुलो बनाउँदै एक हप्ता निषेधाज्ञा थपिएको छ । काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको आइतबार बसेको संयुक्त बैठकले...
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निलकण्ठ सव डिभिजन वन कार्यालय धादिङका सहायक वन अधिकृतलाई ४० हजार घुससहित पक्राउ गरेको छ । फर्निचर उद्योगमा चिरानका...
बढ्यो गाँजा तस्करीको बिगबिगी
सरिता दाहाल - June 20, 2021 0
चुरे मकवानपुर । गाँजा खेतिलाई बैधानिकता दिने नदिने सवालमा संघीय तथा प्रदेश सभामा बेला बेलामा बहस चल्ने गरेको छ । यता गाँजाको “ट्रान्जिट प्वाइन्ट”...
जब बेहुलाले मोटरसाइकलमै बेहुली भित्र्याए
भविन कार्की - June 19, 2021 0
संखुवासभा । न बाजागाजा न जन्तीको लावालस्कर । कोरोना संक्रमणका कारण हाल विवाह समारोहमा यस्ता गतिविधि देखिँदैनन् । जिल्ला प्रशासनले समेत यस्ता गतिविधिमा पूर्णतः...
जर्मनीको लोभलाग्दो पुनरागमन
म्युनिख । पोर्चुगलविरुद्ध ४ गोल ठोकेर जर्मनीले आफू पुरानै लयमा फर्केको संकेत गरेको छ । केही समयदेखि लय गुमाएको जर्मनी टोली यसअघिको खेलमा फ्रान्ससँग...
अर्जेन्टिनाको साँघुरो जित
एजेन्सी - June 19, 2021 0
ब्रासिलिया । दक्षिण अमेरिकी कोपा अमेरिका कपमा उपाधि दावेदार अर्जेन्टिनाले समूह चरणमा पहिलो जित निकालेको छ । अर्जेन्टिनाले अर्काे उपाधि दावेदार उरुग्वेमाथि १–० को...
इंग्ल्यान्डको निराशजनक बराबरी
लन्डन । युरोपेली च्याम्पियनसिपअन्तर्गत समूह ‘डी’को खेलमा इंग्ल्यान्ड घरेलु मैदानमा छिमेकी राष्ट्र स्कटल्यान्डसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको छ । वेम्वली स्टेडियममा शुक्रबार राति भएको खेलमा...
स्पेन भ्रमणका लागि नेपाली टोली घोषणा
काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले स्पेनमा हुने विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत नेपाल, स्कटल्यान्ड र नामिबियाबीच जुलाई तेस्रो साता हुने त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि २० सदस्यीय...
गुइडोद्वारा अर्जेन्टिनाको उद्दार
रियो दि जेनेरियो । कोपा अमेरिका फुटबल अन्तर्गत शनिबार बिहान सम्पन्न संघषपूर्ण खेलमा अर्जेन्टिना विजयी भयो । उसले उरुग्वेलाई १३ औं मिनेटमा ठोकेको गोल...
डा. प्रकाश बुढाथोकी - June 20, 2021 0
गिटीबालुवा उत्खननमा गम्भीरता जरुरी
सरकारले ल्याएको २०७८/७९ आर्थिक वर्षको बजेटमा गिटीबालुवा उत्खनन्का लागि सहज हुनेगरी नीति तथा कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याएलगत्तै सर्वोच्चले यसमाथि गम्भीर हुनुपर्ने भनी तत्काल निर्णय कार्यान्वयनमाथि...
कोभिड व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सक्रियता
किरणराज शर्मा - June 19, 2021 0
नेपालमा कोभिड–१९ को संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएदेखि हालसम्ममा सरकारले यस महामारीविरुद्ध जुध्ने रणनीतिहरूमा निरन्तर विकास, परिमार्जन एवं संशोधन गर्दै आएको छ । सरकारले...
Home खेल खेलअघि मैत्रीपूर्ण खेल्न अनुमति
By प्रशान्त वली
लन्डन । कोरोना महामारीपछि झन्डै तीन महिनापछि सुरु हुन लागेको इंग्लिस प्रिमियर लिग पुनः सुरु हुनुअघि प्रिमियर लिग आयोजकले इंग्लिस प्रिमियर लिगको खेलअघि क्लबलाई एक अर्कासँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न अनुमति दिएको छ । कोरोनाका कारण मार्च पहिलो सातादेखि स्थगित भएको इंग्लिस प्रिमियर लिग १७ जुनदेखि पुनः सुरु हुँदै छ ।
प्रिमियर लिगको क्लबको प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै एक अर्कासँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न अनुमति दिएको हो । मैत्रीपूर्ण खेल क्लबको प्रदर्शन र कमीकमजोरी सुधारका लागि मौका हुन सक्नेछ । मार्च पहिलो सातायता, क्लबहरूले प्रशिक्षण र खेल्ने मौका पाएको छैन ।
मैत्रीपूर्ण खेलका लागि क्लबले विभिन्न नियमको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँ अफिसिय रेफ्री हुनेछैन । क्लबका कोचिङ स्टाफले रेफ्रीको भूमिका निभाउनुपर्ने तथा खेल ९० मिनेटभन्दा बढी हुनेछैन । खेलाडीहरू आफ्नै कारमा खेल स्थलसम्म पुग्नुपर्नेछ । मैत्रीपूर्ण खेल क्लबको स्टेडियम वा प्रशिक्षण स्थलमा हुनेछ । जहाँ जोखिमलाई पूर्ण रूपमा पालना गरिनेछ । खेलाडीहरूको अनिवार्य कोरोना परीक्षण गरिएको रिपोर्ट हुनुपर्नेछ । प्रिमियर लिग पुन सुचारु हुने अवस्था बनेपछि क्लबहरूले झन्डै एक महिनाअघि देखि प्रशिक्षण थालेका छन् । यसै सातादेखि क्लबहरूले कन्ट्याक्ट प्रशिक्षण थालेका छन् ।
म्यानचेस्टर सिटीले १७ जुनमा आर्सनलसँग खेल्नेछ । सोही दिन सेफिल्ड युनाइटेड र एस्टन भिल्लाबीच खेल हुनेछ । २० जुनबाट ३०औं चरणका खेलहरू हुनेछन् । २५ जुलाईमा यो सिजन सकिनेछ । मर्सिसाइड क्लब लिभरपुल ३० वर्षपछि प्रिमियर लिगको उपाधिनजिक छ । लिभरपुललाई च्याम्पियन बन्न केवल दुई जितको खाँचो छ । लिभरपुलले दोस्रो स्थानको म्यानचेस्टर सिटीलाई २५ अंकले पछि पारेको छ । लिभरपुलको २९ खेलबाट ८२ अंक छ । सिटीको २८ खेलबाट ५७ अंक छ । बर्नमाउथ, एस्टन भिल्ला र नर्विच सिटी रेलिगेसन जोनमा छ ।
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – ५ असार
साम्राज्ञीका ‘बोल्ड’ तस्विर (फोटोफिचर)
काठमाडौं । साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह ‘बोल्ड’ अभिनेत्रीका रुपमा चिनिन्छिन् । बोल्ड यस अर्थमा कि उनी आफ्नो काममा ‘बोल्ड’ छिन् । केबल संख्या र पैसाका...
सरिता दाहाल -
सेयर बजारमा पहिरो, ६३ अंकले घट्यो
काठमाडौं । साताको पहिलो दिन आइतबार सेयर बजारमा पहिरो गएको छ । ३ हजार माथि पुगेर रेकर्ड बनाएको नेप्से परिसूचक आइतबार २ हजार ९...
चुनौतीमय नयाँ वर्ष
सिंगो विश्व नै महामारीको चपेटामा परिरहेका बेला नेपालीले कोरोना भाइरसबाट जोगिन सचेतनाको सन्देशसहित विक्रम संवत् २०७६ लाई बिदाइ गरी २०७७ लाई स्वागत गरिरहेका छन्...
काठमाडौंलाई दशैं लाग्यो (फोटोफिचर)
काठमाडौं । पछिल्ला केही दिन यता मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । उपत्यकामा मात्रै प्रतिदिन दुई हजार बढी संक्रमित थपिन थालेका छन्...
दुई हजार वर्षपछि भक्तपुरको बिस्काः जात्रा स्थगित
Editor-Picks Kumar Raut - April 9, 2020 0
भक्तपुर । विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण भक्तपुरको चिनारीका रूपमा रहेको बिस्काः जात्रा अर्थात् बिस्केट जात्रा यसपालि नमनाइने भएको छ ।...
बैतडीका थप २१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
प्रदेश ७ Sushila Bishwokarma - August 29, 2020 0
बैतडी । बैतडीका थप २१ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । शनिबार थप भएकाहरुमा पाटन नगपालिकाका १८, दोगडाकेदार गाउँपालिकाका २ र सुर्नगा...
कोरोनाले मान्छेको मृत्यु भयो भन्दै प्रचार गर्ने पक्राउ
Breaking News Dhruba Lamsal - March 21, 2020 0
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमणबारे अनावश्यक प्रचार गरेको अभियोगमा प्रहरीले एक युवालाई पक्राउ गरेको छ । कोरोनाको कारण एक जनाको मृत्यु भयो तर...
एउटा परिवारको दारुन कथा
Editor-Picks भगीरथ भण्डारी - March 21, 2021 0
इलाम । भारत कोलकातास्थित दमदम सेन्ट्रल जेलमा ४० वर्ष रहेका दीपक तिम्सिनामा घर फर्केपछि परिवारमा खुसी छाएकाे छ । हाल माइनगरपािलका १० का तिम्सिनाकाे ...
अविश्वास प्रस्तावका पक्षधर सांसदहरूद्वारा सुरक्षाको माग
प्रदेश ४ राजधानी समाचारदाता - April 30, 2021 0
पाेखरा । गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने तीन दलले सुरक्षाको माग गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी...
बेलायतमा लकडाउन तीन हप्ता थपियो
विदेश Dhruba Lamsal - April 17, 2020 0
लन्डन । बेलायत सरकारले कोरोनाभाइरस संक्रमणको विस्तार रोक्न थप तीन हप्ता लकडाउन कायम राख्ने निर्णय गरेको बेलायतका विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले बताएका छन् ।...
सिरहामा ५० वर्षीय पुरुषको शव फेला
प्रदेश २ Sushila Bishwokarma - July 30, 2020 0
सिरहा । जिल्लाको सिरहा नगरपालिका वडा नम्बर-१० मा आज बिहान एक पुरुषको शव फेला परेको हो । पदमपुर–नरहैया सडकमा सिरहा नगरपालिका १० का अन्दाजी...
बाँच्ने आशमा जन्मथलो छाड्दै लिदीबासी (फाेटाेफिचर)
प्रमुख Dhruba Lamsal - August 25, 2020 0
बसाँइ हिड्नेको ताँतीले बस्नेको मन रुदछ लाखौको लागि उजाड छ यो देश मुठ्ठीभरलाई त स्वर्ग छ जनवादी गायक जेबी टुहुरेको यो गितको पक्ति जस्तै,आफु जन्मे हुर्केको...
७ प्रतिशतलाई कोरोना खोप
Breaking News प्रशान्त वली - June 12, 2021 0
काठमाडौं । खोप अभियान सुरु भएको १ सय ३४ दिनसम्ममा देशभर कुल जनसंख्याको ७ प्रतिशतले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका छन्् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको...
हृदयविदारक भिडियोमा देखिए रंजित र गीता
Not-to-be-missed राजधानी संवाददाता - March 10, 2021 0
काठमाडौँ । नेपाली चलचित्रमा पार्श्व गायन मार्फत दर्शक स्रोताको मन जितेका गायक केतन क्षेत्रीको स्वरमा रहेको बिल्कुलै नयाँ गीत 'छाडी गयौ'को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक...
२४४२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ५१ जनाकाे मृत्यु
कोरोना संक्रमितलाई राहत
थपिए दुई हजार ४०० कोरोना सङ्क्रमित, ३४ जनाकाे मृत्यु
कपडा, जुत्ता चप्पल देखि सुनचाँदी पसल पनि खोल्न पाइने
तीस हजार युवालाई रोजगारी !